12 Jun 2018 . 11:57 AM
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်မှု အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာမှ တတိယအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ နာမည်ကြီးကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်လို့နေပါတယ်။ အခုလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်ငွေကြယ်ပွင့်တွေကတော့ ….
Lee Eun Ju (1980-2005)
Lee Eun Ju ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ သူမရဲ့ အသက် က ၂၄ နှစ်ရှိနေပါပြီ။ သူမကိုယ်တိုင် လက်ကောက်ဝတ်ကို ဓါးနဲ့ လှီးဖြတ်ပြီး ကြိုးဆွဲချသေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ မိသားစုတွေပြောပြချက်အရတော့ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ Mental illness လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့တဲ့တာကြောင့် အခုလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ နောက်ဆုံးသေခါနီးမှာ “Mom,I am sorry and I love you.” ဆိုတဲ့စာတစ်ကြောင်းကို သွေးနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်ပါ။ သူမသေဆုံးခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ သီချင်းဆိုခြင်း အပြင် Dancer တစ်ဦးအနေနဲ့လည်း လူသိများသလို သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး စိတ်ဖိအားတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မသေဆုံးခင်က သူမရဲ့  Website မှာတော့ သူမတစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေတယ် ဆိုပြီးရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Park Yong Ha (1977-2010)
Park Yong Ha ဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝ ကို အသက် ၃၂ နှစ်မှာ အဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးတာကိုတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတစ်ခုကတော့ Winter Sonata(2002) ဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသား Bae Yong Joon ၊ မင်းသမီး Choi Ji Woo တို့နဲ့အတူတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Park Yong Ha ဟာ သီချင်းသီဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ထူးချွန်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူသီဆိုထားတဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းကို All In(2003) လို့အမည်ရတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
သူရဲ့ သေဆုံးနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ သူ့ရဲ့ မိခင် က ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခွဲ မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူကြိုးဆွဲချပြီး အဆုံးစီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ကြတာကတော့ သူ့ရဲ့ အလုပ်ဖိအား တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Jeong Da Bin (1980- 2007)
အဲ့လိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေကတော့ Jeong Da Bin (1980- 2007) ၊ Ahn Jae Hwan (1972-2008) ၊ Choi Jin Shil (1968-2008) ၊ Kim Ji Hoo (1985-2008) ၊ Jang Chae Won(1982-2008) ၊ Jang Ja Yeon(1980-2009)၊ Kang Do Ri(1993-2015)၊ Lee Ui Soo (1995-2017)၊ Jonghyun(1990-2017) တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင် အများစုမှာ အလုပ်ဖိအားဒါဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့သူတွေ ၊ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုတွေ ကြောင့်အဖြစ်များတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
Photo Credit: asiae.co.kr
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျမှု အမြားဆုံးနိုငျငံတှထေဲမှာမှ တတိယအမြားဆုံးနိုငျငံတဈနိုငျငံဖွဈပါတယျ။ ဒီထဲကမှ နာမညျကွီးကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှလေညျး ပါဝငျလို့နပေါတယျ။ အခုလိုကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျခဲ့ကွတဲ့ အနုပညာရှငျငှကွေယျပှငျ့တှကေတော့ ….
Lee Eun Ju ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ သဆေုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲ့အခြိနျမှာ သူမရဲ့အသကျ က ၂၄ နှဈရှိနပေါပွီ။ သူမကိုယျတိုငျ လကျကောကျဝတျကို ဓါးနဲ့ လှီးဖွတျပွီး ကွိုးဆှဲခသြခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့မိသားစုတှပွေောပွခကျြအရတော့ စိတျကရြောဂါနဲ့ Mental illness လို့ချေါတဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ခြို့တဲ့တာကွောငျ့ အခုလိုကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျခဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ သူမဟာ နောကျဆုံးသခေါနီးမှာ “Mom,I am sorry and I love you.” ဆိုတဲ့စာတဈကွောငျးကို သှေးနဲ့ရေးသားခဲ့တယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
အသကျ ၂၅ နှဈအရှယျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျပါ။ သူမသဆေုံးခဲ့တာကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ ၂၁ ရကျနပေဲ့ဖွဈပါတယျ။
သူမဟာ သီခငျြးဆိုခွငျး အပွငျ Dancer တဈဦးအနနေဲ့လညျး လူသိမြားသလို သရုပျဆောငျမငျးသမီးတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူမအနနေဲ့ စိတျဓါတျကပြွီး စိတျဖိအားတှကေိုခံစားခဲ့ရတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ မသဆေုံးခငျက သူမရဲ့ Website မှာတော့ သူမတဈယောကျတညျးအထီးကနျြနတေယျ ဆိုပွီးရေးသားထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
Park Yong Ha ဟာ သူ့ရဲ့ဘဝ ကို အသကျ ၃၂ နှဈမှာ အဆုံးသတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှဲတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျဖူးတာကိုတှဖေူ့းကွမှာပါ။ သူပါဝငျခဲ့တဲ့ နာမညျကွီးဇာတျကားတဈခုကတော့ Winter Sonata(2002) ဖွဈပွီး ဒီဇာတျကားမှာ မငျးသား Bae Yong Joon ၊ မငျးသမီး Choi Ji Woo တို့နဲ့အတူတူ တှဲဖကျသရုပျဆောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Park Yong Ha ဟာ သီခငျြးသီဆိုတဲ့နရောမှာလညျး ထူးခြှနျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူသီဆိုထားတဲ့ ဇာတျဝငျတေးသီခငျြးကို All In(2003) လို့အမညျရတဲ့ ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှဲထဲမှာ နားဆငျနိုငျပါတယျ။
သူရဲ့သဆေုံးနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျကိုတော့ သူ့ရဲ့မိခငျ က ၂၀၁၀ ခုနှဈဇှနျလ ၃၀ ရကျနေ့ နံနကျ ၅ နာရီခှဲ မှာ တှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုယျသူကွိုးဆှဲခပြွီး အဆုံးစီရငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။သူဒီလိုဖွဈပှားခဲ့တာနဲ့ပတျသကျလို့ ကောကျခကျြခခြဲ့ကွတာကတော့ သူ့ရဲ့အလုပျဖိအား တှကွေောငျ့ဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။
အဲ့လိုပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှငျတှကေတော့ Jeong Da Bin (1980- 2007) ၊ Ahn Jae Hwan (1972-2008) ၊ Choi Jin Shil (1968-2008) ၊ Kim Ji Hoo (1985-2008) ၊ Jang Chae Won(1982-2008) ၊ Jang Ja Yeon(1980-2009)၊ Kang Do Ri(1993-2015)၊ Lee Ui Soo (1995-2017)၊ Jonghyun(1990-2017) တို့ ပဲဖွဈပါတယျ။ အခုလို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှငျ အမြားစုမှာ အလုပျဖိအားဒါဏျကို မခံနိုငျတဲ့သူတှေ ၊ စိတျကရြောဂါနဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာခြို့တဲ့မှုတှေ ကွောငျ့အဖွဈမြားတာကို တှရှေိ့ရပါတယျ။